Home News AQRISO: 18-mashruuc oo Madaxweyne Farmaajo soo dhagax dhigay oo aan midna laga...
AQRISO: 18-mashruuc oo Madaxweyne Farmaajo soo dhagax dhigay oo aan midna laga Fulin!!
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay Bartiisa facebook-ga waxaa uu ku shaaciyay 18-mashruuc oo uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhagax dhigay mudadii uu xilka haayay kuwaasi oo aan xitaa midna laga fulin.
Qoraalka uu bartiisa soo dhigay Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa u qornaa sida tan.
18 MASHRUUC OO MADAXWEYNE FARMAAJO SOO DHAGAX DHIGAY XAGEE AYAY KU DANBEEYEEN?!
18 mashruuc oo qiimayn aan lagu samayn qarashka ku baxaya. Lana sheegin cida bixinaysa qarashkaas. Sidoo kalena aan loo xilsaarin hay’ad ama shirkad fulinaysa ayaa Madaxweyne Farmaajo kasoo dhagax dhigay sanad kahor deegaanada Puntland iyo Galmudug. Su’aasha taagan maanta ayaa ah xagee ayay ku danbeeyeen mashaariicdaas?!
Akhriso mashaariicda Madaxweyne Farmaajo soo dhagax dhigay sanad kahor:
1. Wado Laami isku xirta Garoowe & Eyl (222km).
2. Wado Laami isku xirta Kala Bayr & Caluula (376km).
3. Wado Laami isku xirta Galkacyo & Hobyo (264km).
4. Wado Laami isku xirta Hobyo & Caabudwaaq (355km).
5. Dayactirka laamiga isku xira Dhuusamreeb & Gaalkacyo (235km).
6. Dhismaha Xarunta Nabadeynta iyo Dib u Heshiisiinta-Gaalkacyo-Galmudug.
7. Dhismaha Xabsiga dhexe ee Galmudug – Galkacyo.
8. Dhismaha Xarunta Xanaaneynta Agoonta Ahlusuna – Dhuusamareeb.
9. Dhismaha Dugsiga Farsamada Gacanta – Dhuusamareeb.
10. Dhismaha Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb.
11. Dhismaha Xabsiga magaalada Dhuusamareeb.
12. Dhismaha Jaamacadda Umadda Gaalkacyo.
13. Dhismaha Jaamacadda Umadda Cadaado.
14. Dhismaha Jaamacadda Umadda Dhuusamareeb.
15. Dhismaha Jaamacadda Umadda Caabudwaaq.
16. Dhismaha Xabsiga Caabudwaaq.
17. Dhismaha Garoonka diyaaradaha Cadaado.
18. Dhismaha Dekedda Hobyo.
Afka wax laga sheego maanta kadib ha aaminina ee ishu macalin ha idiin noqoto!